စက်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး - Ikkaro
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း >> စက်မှုလုပ်ငန်း Mantenimiento
မတူတာကိုငါတို့မှတ်မိသေးတယ် ထိန်းသိမ်းမှုအမျိုးအစားများ တည်ရှိပြီး၊ ငါတို့ပြောပြီးပြီ၊ နှင့်နည်းစနစ်အချို့ကဲ့သို့ RCM
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းသဘောတရား ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဌာန၏ပုံမှန်မဟုတ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည် ဒါပေမယ့်သူတို့ကဖြည့်စွက်ပြီးအဲဒါတွေကိုငါတို့ထည့်စဉ်းစားပြီးတော့အဲဒါတွေကိုလုပ်ဆောင်ရမယ်။
El TPM သည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအကြားပေါင်းစည်းမှုပါဝင်သည်. TPM တွင်အော်ပရေတာသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်မရ။ ၎င်းသည်အော်ပရေတာ၏တိကျသောလေ့ကျင့်မှုနှင့်သူကတာဝန်ရှိကြောင်းလက်ခံသည်ကဲ့သို့အချို့သောလိုအပ်ချက်များလိုအပ်သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကဒါကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြဌာန်းပေမယ့်အလုပ်သမားကပေါင်းစည်းမှုကိုမခံစားရဘူး၊ စံပြမှာမပါ ၀ င်ဘူးဆိုရင်အဲဒါကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ဒိုင်းနမစ်ကဲ့သို့ဖြစ်သည် အရည်အသွေးစက်ဝိုင်းများ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ထုတ်လုပ်မှုအတွင်းမှာသူတို့ဟာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုစိုက်ထည့်ခံရပါတယ်။
လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေများတွင်ပြင်းထန်သောစျေးကွက်တစ်ခုရှင်သန်ရန်အပြိုင်အဆိုင်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်မှုချွတ်ယွင်းမှုပပျောက်ရန်လိုအပ်သည်။ ခွင့်လွှတ်သည်းခံနိုင်မှု (သို့) လိုချင်သောမျက်နှာပြင်အချောထည်များထုတ်လုပ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုပါ၊ ပျက်စီးသွားသောပစ္စည်းများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချို့ယွင်းချက်များလည်းမရှိပါ။
အလိုအလျောက်အလိုအလျောက်နှင့်စက်ရုပ်များမိတ်ဆက်ခြင်း (စက်ရုံအလိုအလျောက်) လိုင်းအော်ပရေတာများတွင်လိုအပ်သောနည်းပညာစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ထားသော ၀ န်ထမ်းများ ပို၍ လိုအပ်သည်။
El RCM (ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုဗဟိုပြုထိန်းသိမ်းခြင်း)ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကို ဦး တည်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသည်အစီအစဉ်တစ်ခုရေးဆွဲရန်ရည်ရွယ်သောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည် စက်မှုဇုန်တစ်ခုတွင်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမရ။ ၎င်းသည်အစိတ်အပိုင်းများကိုအခါအားလျော်စွာအစားထိုးရန်ရှောင်ရှားရန်အမြတ်အစွန်းရရှိခြင်း၊ အခြားနည်းလမ်းများထက်အားသာချက်များကိုဆက်တိုက်ရရှိစေသည်။
ကန ဦး တွင် RCM ကိုအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည် လေကြောင်းပျံသန်းရေးလုပ်ငန်းဤအစားထိုးကုန်ကျစရိတ်များသည် ပို၍ စျေးကြီးပြီးဤကဏ္inမှကုမ္ပဏီများအတွက်အဓိကစီးပွားရေးပြသနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်၎င်းသည်အထက်ဖော်ပြပါကဏ္inတွင်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားရခဲ့သောကြောင့်အခြားနယ်ပယ်များသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
El ကြိုတင်ခန့်မှန်းထိန်းသိမ်းခြင်း ၎င်းသည်ကိရိယာများနှင့်အထောက်အကူပြုပစ္စည်းများ၏အခြေအနေနှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခါအားလျော်စွာစစ်ဆေးမှုများကိုအခြေခံသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းမှုအမျိုးအစားကိုရည်စူးသောပညာရှင်များသည်၎င်းတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသောကိရိယာများကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းသိရန်နှင့်ဤစနစ်များကိုထိခိုက်စေနိုင်သောအချက်များ (သို့) အချက်အလတ်များသိရန်လိုသည်။
por ejemploပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများသည်စနစ်တစ်ခု၏ခံနိုင်ရည်ရှိသောလည်ပတ်မှုအပူချိန် (သို့) ဖိအားအတိုင်းအတာ၊ အမြင့်ဆုံးလက်ခံနိုင်သောတုန်ခါမှု၊ မချိုးဖျက်မီလက်ခံသောသံသရာအရေအတွက်၊ အလုပ်ချိန်များ၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိနိုင်သောကျရှုံးမှုများစသည်တို့ကိုသိထားရမည်။ အရာအားလုံးကိုပစ္စည်းကိရိယာထုတ်လုပ်သူတွေဆီကအချက်အလက်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးဆုံးဖြတ်ရမယ်၊ ခေတ်မီဆန်းသစ်တဲ့လေ့လာမှုတွေနဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွေကြောင့်မအောင်မြင်ဘူး။
El ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၎င်းသည်ရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ပွားပြီးသောအခါဆောင်ရွက်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်များသောအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအများစု၊ အထူးသဖြင့်အသေးစားလုပ်ငန်းများတွင်အဖြစ်များဆုံးဖြစ်သည်။ အသေးစားထုတ်လုပ်သူများ (သို့) အလုပ်ရုံများအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုတင်ကာကွယ်မှုနှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သောပုံစံများ၏ကုန်ကျစရိတ်များ (သို့) ရှုပ်ထွေးမှုတို့သည်အကောင်းဆုံးဟုမဆိုလိုပါ။ သို့သော်လည်းသေးငယ်ခြင်း၊ မလှုပ်မရှားမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုများသည်ကုမ္ပဏီကြီးများကဲ့သို့ကြီးကြီးမားမားဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ဤပုံစံအတွင်း၌သာရှိသည် ပျက်ယွင်းမှုများပြုပြင်ခြင်း ချောဆီကဲ့သို့သောစနစ်၏အခြေအနေကိုဆုံးဖြတ်ရန်၊ သန့်ရှင်းရေးနှင့်အခြားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကိုဆုံးဖြတ်ရန်အလုပ်မလုပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြောင်းလဲခြင်း၊
El ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ် ပရိုဂရမ်မာသည်တပ်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ်စက်သို့တက်ရောက်ရန်အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောလုပ်ဆောင်ချက်များသို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်ချက်များအစုံဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့အားလုံးရပ်တန့်နိုင်မည်ဟု ၁၀၀% အာမမခံသော်လည်းဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့်အဓိကကျရှုံးမှုများကိုကာကွယ်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ကိစ္စတိုင်းတွင်ဆောင်ရွက်ရန်နည်းလမ်းများကွဲပြားနိုင်သည်၊ ကိရိယာအားလုံးသည်တူညီသောပြုပြင်မှုတာဝန်များမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အနီးကပ်ဆက်စပ်နေသည် စီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းသိမ်းခြင်း.
El ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်း ၎င်းသည်အနည်းငယ်ခေတ်မီပြီးကျရှုံးမှုကိုကာကွယ်ရန်ကြားဝင်ဆောင်ရွက်မှုများပါ ၀ င်သည်။ ဤကိစ္စတွင်၎င်းတို့သည်စက်ပစ္စည်းများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအပေါ် မူတည်၍ အမှုအရာပေါ် မူတည်၍ စက်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုအချိန်ပို (သို့) နည်းနည်းကြာသောအချိန်များတွင်ဆောင်ရွက်လိမ့်မည်။
အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာဖြစ်သည် ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အထောက်အပံ့များကိုထိန်းသိမ်းပါမရ။ ထို့အပြင်ခန့်မှန်းချက်တစ်ခုကဲ့သို့၎င်းကိုစက်ယန္တရားများဖြင့်လည်ပတ်လေ့ရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုမလျှော့ချဘဲမလှုပ်မရှားအချိန်အလွန်စျေးကြီးသောဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်လိုချင်သောအမြင့်ရရှိနိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းပေးသည်။
ကြိုတင်ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများထဲမှ၎င်းသည်ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောသန့်ရှင်းရေးမှဖြစ်သည် စနစ်တကျလုပ်ဆောင်ပါစက်၏ထုတ်လုပ်သူ၏ထောက်ခံချက်များ (သို့) ပညာရှင်များ၏ထင်မြင်ချက်များပေါ် မူတည်၍ မအောင်မြင်မီဝတ်ဆင်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများပြောင်းလဲခြင်း၊ ချောဆီများပြောင်းလဲခြင်းစသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်းမဖြစ်ပွားမီကျရှုံးမှုကိုကာကွယ်ပေးသည်။
မင်းဒီစာကိုဖတ်နေတယ်ဆိုရင်မင်းသတင်းအချက်အလက်ပိုလိုတယ်။ စက်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး၏ဤအဓိကအကြောင်းအရာများကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစီအစဉ်, ကိရိယာများ CMMS နှင့် ထိန်းသိမ်းမှုအမျိုးအစားများ.
လောလောဆယ်, ထို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းများကိုကွန်ပျူတာသုံးခြင်းသည်အရည်အသွေးအတွက်ကြီးမားသောခုန်ပျံမှုကိုဆိုလိုသည် ယခင်က၎င်းအားမည်သို့လည်ပတ်ခဲ့သည်ကိုနှိုင်းယှဉ်ပါ။ ၎င်းသည်ပိုမိုကောင်းမွန်သောထိန်းချုပ်မှုကိုခွင့်ပြုရုံမကဖြစ်နိုင်သောကျရှုံးမှုများကိုကာကွယ်ခြင်းနှင့်စက်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခြင်းကိုထိခိုက်စေသော parameters များကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းကိုလွယ်ကူစေသည်။
CMMS သည်အတိုကောက်ဖြစ်သည် ကွန်ပျူတာအထောက်အကူပြုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစီမံခန့်ခွဲမှု အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်၎င်းသည်အတိုကောက် CMMS (Computerized Maintenance Management System) နှင့်ကိုက်ညီသည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုများအတွက်အစီအစဉ်များပံ့ပိုးပေးသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကုမ္ပဏီပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု.
El စက်မှုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ၎င်းသည်သင်လုပ်ကိုင်နေသောစက်ပစ္စည်းများအားလုံးကောင်းမွန်သောအခြေအနေတွင်ရှိနေကြောင်း၊ ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးကောင်းများကိုသေချာစေရန်လိုအပ်သောအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကောင်းမွန်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမူဝါဒရှိမှသာကျရှုံးမှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေပျက်ပြားမှုများကိုအနည်းဆုံးဖြစ်စေနိုင်သည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းထိန်းသိမ်းခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်ပေါင်းများစွာကိုစုစည်းပေးသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ခုဖြစ်သည် စံများနှင့်နည်းစနစ်များ မည်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်း (သို့) အလုပ်ရုံအမျိုးအစားမဆိုစက်ပစ္စည်းများနှင့်အထောက်အပံ့များကိုထိန်းသိမ်းရန်။ အသုံးပြုသောစက်များနှင့်ကိရိယာများကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရန်နှင့်အဓိကပျက်ယွင်းမှုများလျှော့ချရန်၊ ကောင်းမွန်သောမူဝါဒရှိရန်လိုအပ်သည်။